कश्मीर एक ज्वलन्त अन्तर्राष्ट्रिय विम्ब हो । एउटा स्वायत्त राज्यका जनताको स्वतन्त्रताको लामो संकल्पको विम्ब । सत्तरी वर्षदेखि कठोर र घना सैनिकीकरणबीच टिकिरहेको एक भिन्नै जनसंग्रामको विम्ब । राजनीतिक बाचा र धोकाको विम्ब ।
अचानक ‘देश बदल्ने बाटो’ मा पुष्पलाल फेला परे भने के होला ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै कोरेको ‘देश बदल्ने बाटो’ (कान्तिपुर, ७ साउन) पक्कै पनि एक ठाउँमा पुगेर उनलाई चामत्कारिक लाग्ला । केही साथीसँग कलकत्ताको गुमनाम कोठामा ७० वर्षअघि आफूले गठन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अवतारले शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको थाहा पाउँदा उनी रोमाञ्चक पनि हुँदा हुन् । अझ यो ‘सरकारले समानतालाई समृद्धिसँग जोडेको छ’ भन्ने पढ्दा गर्व पनि लाग्दो हो ।
आरोपको पनि अलग राजनीति छ । जस्तै, डलर खाएको आरोप । नारी अधिकारको कुरा गर्नेहरू डलर खाने ! दलितका निम्ति न्याय खोज्नेहरू डलर खाने ! आदिवासी जनजातिको हकका निम्ति लेख्ने त नम्बरी डलर खानेहरू ! धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गर्नेहरू झनै क्रिस्चियनको डलर खाने भैहाले । डलरको कथा एकातिर छ भने डलर खाएको आरोपको कथा अर्कैतिर । यस बीचमा अलमलिएको सत्य खोज्नैपर्ने भएको छ ।
संघीयता स्वाहा !
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट कसरी ७७ जिल्लाको जन्म भयो ? संविधानले त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र बनाएको हो । पुरानै जिल्लालाई आधार बनाएर प्रदेश रचिएको सत्य हो । रुकुम र नवलपरासीका केही भाग फरकफरक प्रदेशमा राखिएको पनि सही हो । तर संविधानले नचिन्ने, कुनै ऐनले गठन नगरेका ७७ जिल्ला कहाँबाट आए ?
झुट जति मूलधार भएको देशमा सिधा सत्य नै बागी हुन्छ । प्रसंग नागरिकताको हो । मूलधार भन्छ –४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । सिक्किमीकरण र फिजीकरणको चपेटामा नेपाल परिसकेको छ । भोलि देशै नरहे के गर्ने ? यो पढेलेखेका, देशदुनियाँ देखेका विद्वान तथा राजनीतिकर्मीहरूले निश्चिन्त भएर प्रचार गरेको कुरा हो ।
डोजर चलाइरहेको देश
काठमाडौंबाट धेरै टाढा छैन, झिल्टुङ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि कुनै बेला त्यहाँ बस्न पुगेका थिए । ज्वालामुखी लामिछाने झिल्टुङकै एक विद्यालयमा पढाउँछन् । इतिहासमा रुचि राख्छन्, बेला-बेला छापिन्छन्, उनका लेख पनि ।
यो मुलुकमा सिधासिधा भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । सिधा कुरा हो, विष्णु पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव हुन् र बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने किर्तेकारितामा उनको मुख्य भूमिका छ । यो पनि उत्तिकै सिधा कुरा हो कि उनलाई भूमाफियाले त्यो जग्गा उपहार दिएको हो । औपचारिकताका लागि बनाइएका कागजपत्रको कुरा गरिरहनु परेन । एउटा जाली वक्तव्य निकालेर उनी उम्कने ठाउँ छैन ।
किसान तर्साउने बुख्याँचा !
सञ्जीवनी कृषि फर्ममा टलरम्म टमाटर फलेका छन् । टमाटर पाक्ने सिजनमा रीता सुनारका मनमा भने आन्दोलनको मनस्थिति रातै पाकेको छ । भनिएको छ, देशमा समृद्धि नै समृद्धिको एजेन्डा छ । सरकारी भाष्यमा समृद्धि एक मायावी घोडा हो, जो हिनहिनाइरहेको छ ।
अराजकताको दुई तिहाइ मोल
प्रधानमन्त्री ओलीले घरघरमा पाइपबाट ग्यास पुर्‍याइदिने गफ दिए । मान्छे गलल्ल हाँसे । डेढ वर्षपछि गोबरग्यास उद्घाटन गर्दै उनले घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने काम सुरु भएको भाषण गरे । मान्छे झन् धेरै हाँसे । आखिर चुलोचुलोमा पाइपबाट पुर्‍याउने भनेको गोबरग्यास थियो कि पेट्रोलियम ग्यास ?